The structure of the interview, အင်တာဗျူးတစ်ခု တည်ဆောက်ပုံ ﻿
The structure of the interview, အင်တာဗျူးတစ်ခု တည်ဆောက်ပုံ
ချိတ်ဆွဲရန်စာတန်း: jobless jobs in myanmar job my job good job career work interview structure HR advice
Traditional structure of the interview:
Collecting the candidate
Asking ,, non-interview,, question in order to set the atmosphere
Arranging the furniture so that the candidate feel more confortable, for example rather than sitting around office table to be seated atalow coffee table or side by side on sofa
Offering coffee, tea or soft drinks
Smiling and sustaining eye contact with candidate and friendly attitude
Presenting the expected time frame of the interview
Once all are seated the interview should start with series of question related toanumber of distinct areas. The sequence of questioning might vary; however the typical cycle should be as below:
Recent work history or experience
This part should take at least 50% of the interview. Key objectives are to understand clearly the main task per each position, responsibilities and achievements. Also is important to understand which part of the job the candidate enjoyed and which dislike.
In this part to riseaquestion related to ambitious and where the candidate see herself/himself in the short and long term and how he/she see fulfillment of particular ambitious.
Placeaquestion to non-work activities, what the candidate like doing in spare time. Aim is to see if the candidate has live/work balance. You can judge the evidence of motivation, dedication and persistent of the candidate
You should place question about personal circumstances like married status, has children, where the candidate live etc. Objective is to understand if they might not be any social or practical constraints.
You might askaquestion about candidate family background, parents, family values, childhood etc. You might better evaluate the supportiveness and social, economic stability of candidate background
Level of education and kind of education is essential for some position where is needed the minimum level as mandatory for fulfillment of the position. Also should be place question especially for fresh graduated about they performance at school and how they compare with their peers, how they particularly handle certain subjects etc.
- အင်တာဗျူးရမည့်လူများကို စုဆောင်းခြင်း
- ရင်းနှီးမှုရရှိစေသော နှီးနှောဖလှယ်သည့် စကားများကိုပြောဆိုခြင်း
- အင်တာဗျူးသူအား သက်တောင့်သက်သာ ရှိစေခြင်း (ဥပမာ ရုံးစားပွဲတွင်ထိုင်စေခြင်းထက် Coffee စားပွဲခုံတွင်ဘေးချင်းကပ်ထိုင်ကာ စကားပြောခြင်း)
- Coffee, လ္ဘက်ရည်, အအေး အစရှိသော အရာတစ်ခုခု တိုက်ခြင်း
- ပြုံးခြင်း၊ မျက်လုံးချင်းဆုံ၍ ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ စကားပြောခြင်း
- အင်တာဗျူးကြာချိန်ကို ခန့်မှန်းခြင်း
နေရာထိုင်ခင်းများသေချာစွာခင်းကျင်းထားပြီးပါက သင့်လျော်သော မေးခွန်းများ မေးရမည်။
လတ်တလောအလုပ်အကိုင် (သို့) အတွေ့အကြုံ
အကြောင်းအရာများသည် အင်တာဗျူး၏ ၅၀ရာခိုင်နှုန်း ခန့်ပြောရမည်ဖြစ်သည်။
အရေးပါသည့်အချက်များမှာ အလုပ်နေရာတခုစီ၏ နေရာအနေအထား၊ တာဝန် ဝတ္တရားနှင့် ရရှိမှုများကိုပါ ပါဝင်အောင် မေးရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ဘယ်လိုအလုပ်ရာထူးကို ပိုမိုနှစ်သက်စိတ်ဝင်စားသည်ကို နားလည်အောင် လုပ်သင့်သည်။
ဤအချက်သည် ရည်မှန်းချက်ပြည့်ဝမှုနှင့် အင်တာဗျူးဖြေသူ၏ ရေရှည် (သို့) ရေတို ရည်မှန်းချက်ထားမှုများအပေါ် သိရှိနိုင်သည်။
အလုပ်နှင့်မသက်ဆိုင်သောမေးခွန်းများမေးကြည့်ပါ။ အင်တာဗျူးခံသူ၏ အားလပ်ချိန်တွင်လုပ်ဆောင်မှုများကိုမေးပါ။ အဓိကမှာ သူ့ထံတွင် အလုပ်နှင့်ဘဝ ညီမျှမှုရှိ၊ မရှိ ဆန်းစစ်ပါ။ သူ၏စိတ်ဝင်စားမှု၊ ဦးတည်ချက်များကိုလေ့လာပါ။
လူမှုရေးအခြေအနေများကိုလည်းမေးသင့်ပါတယ်။ ဥပမာ အိမ်ထောင်မှုအခြေအနေ အိမ်တည်နေရာ အစရှိသည်များကိုမေးကြည့်ပါ။
အင်တာဗျူးဖြေသူ၏ မိသားစုအကြောင်း၊ ငယ်ဘဝအကြောင်းများကိုမေး၍ သူ၏လူမှုဘဝအခြေအနေ၊ စီးပွားရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုလည်း စုံစမ်းသင့်သည်။
ပညာရေးအဆင့်မြှင့်မှုဟာ အချို့သောရာထူးများအတွက် အလွန်အရေးပါ ပါတယ်။ ရာထူးအနေအထားအတွက် ပညာရေးနှင့် စွမ်းဆောင်နိုင်ရည်ဟာ လုပ်ငန်းခွင်မှာ အရေးကြီးပါတယ်။